Global Voices teny Malagasy » Zarao ny Majika · Global Voices teny Malagasy » Print
Zarao ny Majika
Voadika ny 15 Septambra 2019 6:35 GMT 1	 · Mpanoratra Sara Moreira Nandika imanoela fifaliana
Ny hatsaram-panahin'ny blaogera feminista iray – sy vintana tonga tamin'ny fotoana tsy nampoizina – no nitondra ahy tato amin'ny Global Voices tamin'ny Fararano 2008.
Vao avy niverina nody an-tanindrazana tany Porto aho, voalohany nipetrahako irery taorian'ny enim-bolana nampianarana tany Timor-Leste. Tena toa androm-pitahiana ny zavatra niainako tany amin'ireo toeramifandaka ka niverina niaraka tamin'ny fihetseham-po maika sy tsy hay noresena aho, ary finiavana mahery vaika hanova izao tontolo izao – miaraka amin'ny hakingana be araka izay mety ho vita tany am-piandohan'ny faha-20 taona.
Naka ny solosainako ary aho noho izany, nanomana tsara ny rantsan-tanako ary nanomboka nandefa imailaka, lahatsoratra am-blaogy sy bitsika teny amin'ny toerana rehetra. Nila nanitatra ny tambajotra sosialiko aho mba hahafahako manome jery bebe kokoa ho an'ny kaoperativana asan-tanana sy kanto nentim-paharazana manome aingam-panahy izay tarihan'ireo vehivavy Timorey nihaona tamiko. Amin'ny maha-tanora injeniera informatika ahy izay voalohany vao naheno resaka mikasika ny socent , ny hanampy hametraka karazana vondrona TIC ho an'ny vehivavy teny an-toerana ny nofinofiko, tafiditra tao anatin'izany ireo tovovavy mpianatra nampianariko informatika tany Dili. Niriako izy ireo mba handray ny informatika mba hitantaran'izy ireo ny tantarany manokana momba ny fahaleovantenany. (Niezaka ny hanao toy izany aho tamin'izany fotoana izany, tamin'ny alalan'ny blaogiko tena niompana loatra tamin'y fiainako manokana 🙂
Raha nandalo tamin'ity dingana manafaka amin'ny fahitana ireo olana ara-tsosialy sy ny Web 2.0 ity, ny farany aho lasa nisoratra anarana tamin'ny lisitra fandefasana imailaka nantsoina hoe “systers”. Nanokatra varavarana maro ho ahy izany, fa ilay nitondra ahy tato amin'ny GV no hifantohako. Fiandohan'ny Desambra 2008, nandefa imailaka iray tao amin'ilay lisitrany ny ‘systers’ ny “Zazavavy Majikan'ny Aterineto”, lisitra nanambaràna fifaninanana ahazoana solosaina  nokarakarainy tao amin'ny blaoginy mikasika ny poezia sy ny teknolojian'ny bilaogy.
Nilaza i Liz Henry fa nisy “solosaina maro be” ho avy amin'izay “hametraka zavatra tsy manam-paharoa sy mahaliana eto amin'izao tontolo izao, miaraka amin'ireo fitaovana ilaina amin'izany”.
Nieritreritra mikasika ny “majika” aho sy ny dikan'ny hoe solosaina tamiko. Namela ahy haneho ireo hevitro an-tapitrisany rehetra sy ny fahaizako mamorona izany, ary tonga dia mamela ahy hampiditra izany mivantana ao amin'izao tontolo izao. Satria manao izany aho dia afaka mifandray mivantana amin'ireo olona hafa sy ny hevitr'izy ireny. Ny majika amiko ao anatin'ity fifaninanana ity dia ny fanaparitahana ity fanomezana hery sy fifandraisana ity. Iza no mety hataoko faly indrindra? Iza no hametraka zavatra tsy manam-paharoa sy mahaliana eto amin'izao tontolo izao, miaraka amin'ireo fitaovana ilaina amin'izany?
Napetrako ny sombin-tantarako, dia izay, nosafidiany ilay izy  ary nomeny solosaina nitentina 6.000$ aho – ARY nampifandraisiny tamin'ny Global Voices, notoroiny hevitra fa tokony hanomboka hanao tatitra eto mikasika an'i Timor-Leste aho.
Tsy fantatr'i Liz mihitsy ny fiantraikan'izany fihetsika izany teo amin'ny fiainako nandritra ireo taona maro nanaraka izany. Nanome fahatokisana ahy loatra ny hatsaram-panahiny hany ka nanapa-kevitra ny hirisika sy hiala amin'ny asako andavanandro aho mba hifantohako manokana amin'ny “tena zava-dehibe”, indrindra ny fanoratana ho an'ny Global Voices toy ny mpirotsaka an-tsitrapo. Taty aoriana, lasa toniandahatsoratra ho an'ireo firenena miteny Portiogey aho, asa tapa-potoana izay nohazoniko hatramin'ny volana vitsivitsy lasa izay.
Trosako amin'ny Global Voices sy ireo olona rehetra niarahako niasa tato amin'ny vondrom-piarahamonina (indrindra fa ny mpanonta lahatsoratro voalohany, Paulissima! <3) ny fotoana lava sy lalina nianarana mikasika ny fanaovana gazety, politika, fikatrohana, tambajotra, fahatakarana ara-kolontsaina, fizarana sy fanetrentena. Matetika aho milaza fa na dia ho an'ny diplaomana injeniera mikasika ny solosaina aza no ananako, nahazo diplaoma nofinofy momba ny haino aman-jery ihany koa aho avy amin'ny Oniversite Maimaimpoanan'ny Global Voices izay tena isaorako be dia be.
Raha ny mikasika ireo solosaina nomen'i Liz ahy tamin'ny 2008 – na dia mbola tsy niforona aza ilay “orinasana famelabelarana tranonkala tantanan'ny vehivavy Timorezy lehibe indrindra” nonofinofisiko, vitako ny nametraka azy ireny ho teo am-pelatanan'ny olona tsara tany amin'ny toerana tsy nampoizina – Tranon-drelijiosy Dominikàna ao Oecussi tanàna timorey iray mitoka-monina, izay iainana sy ianaran'ny zazavavy 50 mahay tenim-pirenena maro, kinga saina be. Nandany volana iray niaraka tamin'izy ireo tao aho ttaminny maha-mpampiofana TIC nirotsaka an-tsitrapo ahy, niezaka ny nanaparitaka ny fampahaleovantena sy ny fifandraisana izay nosoratan'i Liz tao anatin'ny fanambiny mba “hizara ny majika”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/09/15/141631/
 fifaninanana ahazoana solosaina: https://liz-henry.blogspot.pt/2008/11/hp-magic-giveaway-guidelines.html
 nosafidiany ilay izy: https://liz-henry.blogspot.pt/2008/12/winner-for-hp-magic-giveaway.html
 Oecussi : https://en.wikipedia.org/wiki/Oecusse_District”